Eyona midlalo yokudubula ilungileyo yePC | Iindaba zeGajethi
UPaco L Gutierrez | 30/12/2020 10:00 | Ukuhlaziywa ukuba 30/12/2020 16:37 | ngokubanzi, Videogames
Ukuba naluphi na uhlobo lume ngaphezu kwalo naliphi na elinye iqonga lePC, leyo yiShotters (imidlalo yokudubula). Kukule qonga apho le midlalo ihlala ixhaphaza kakhulu, inekhathalogu enkulu yazo zonke, kumntu wokuqala nakumntu wesithathu. Singafumana imidlalo yokhuphiswano, apho inkalo ye-Intanethi izuza ubunzimaUninzi lwale midlalo kwi-Intanethi yinto esinokuyibona kwii-Esports. Ukudlala ngekhibhodi kunye nempuku kunika indawo eninzi yokuphucula, kuba ukujolisa ngelixa ushukuma kuya kuba lula.
Ngaphakathi kuhlobo lwemidlalo yokudubula, sifumana eziqhelekileyo zinemikhankaso, apho sikhatshwa libali elichazwe kakuhle, ukhuphiswano lwemidlalo yeqela, apho ukusebenzisana nabahlobo bethu kubalulekile ukuze siphumelele, okanye idabi lokulwa, apho ukufumana elona qela libalaseleyo emephini kusinceda siphumelele umdlalo, kokubini sisodwa kunye nabanye. Kweli nqaku siza kukubonisa eyona midlalo yokudubula yePC.
1 Ubizo lomsebenzi: WarZone
2 UDOMO ongunaphakade
4 Halo: The Master Collection oyiNtloko
5 I-Rainbow Six: Ingqonge
6 Iimpawu zeNtshukumo
7 IEksodus kwiMetro
8 Ubomi besiqingatha: Alyx
Ubizo lomsebenzi: WarZone
Ayinakuphuthelwa nakweyiphi na ephezulu, umnxeba weDuty uye wakwazi ukwenza umdlalo ongazange ubonwe ngaphambili ophuculweyo obonwe ngeBlackout kwiCall of Duty Black Ops 4. Imephu enkulu esekwe kwiimephu zangoku zeMfazwe yesi-2 enendawo enkulu apho abadlali abali-150 bazingelana bade bayokugqibela ukuma. Umdlalo uneendlela ezininzi, phakathi kwazo esinokuthi sidlale ngokukodwa, ii-duos, ii-trios okanye ii-quartet, sisenza iqela nabahlobo bethu nge-intanethi. Umdlalo ukwasinika ezinye iindlela zomdlalo ekugqibeleni ngohlobo lweziganeko, ezinje ngeHalloween okanye iKrisimesi.
Lo mdlalo udlala eqongeni, ke ukuba siwenzile ukuba usebenze siza kungena kumlo nawo onke amaqonga isihloko sayo esifumaneka, PC, PlayStation4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S.. Ukuba asifuni ukuwela umdlalo ukulinganisa isikali sinokuthi singawenzi nanini na. Eyona nto intle malunga nesi sihloko kukuba isimahla, inikezela ngeentlawulo ngaphakathi kwesicelo sokuthengwa kwezixhobo okanye izikhumba zomlinganiswa. Into ebalulekileyo kukuba ezi ntlawulo aziboneleli nangayiphi na into, sinokuthenga nokupasa idabi nge- € 10.
Umkhondo othe ngqo wokuqalisa kwakhona kwamabhaso esaga ekhutshwe ngo-2016 ephuhliswe yi-ID yeSoftware, apho ifuna ukubonelela ngokudityaniswa kwesantya, isiphithiphithi kunye nomlilo. Umdlalo ubalasele ngokwendawo yawo enikezela ukulwa okumangalisayo ngokuchasene nezidalwa ezivela kwelabafileyo apho eyona nto ibalaseleyo yindlela abanokuba nogonyamelo ngayo, ngenxa yeGore abayinikelayo. Kwi-DOOM ingunaphakade, umdlali uthatha indima yokubulala umntu (DOOM Slayer) kwaye sibuyele ukuziphindezela kwimikhosi yesihogo.
Umdlalo ukwangumculo omnandi kakhulu kunye necandelo elibonakalayo elisusa ii-hiccups ngaphandle kweplatifomu esiyidlalayo, kodwa kwi-PC kulapho sinokonwabela khona ngobuqaqawuli bayo bonke, sisebenzisa i-Framerate ephezulu kakhulu kwi-144Hz iimonitha.
Fumana i-DOOM ingunaphakade kwi-Amazon kule khonkco.
Ngaphandle kwamathandabuzo omnye wemidlalo ethandwayo kule minyaka idlulileyo, uye waba yinto yokwenyani, umdlalo odlalwa ngabadala nabancinci. Yi-Battle Royale apho iqela okanye umdlali ophumeleleyo wokugqibela emi kuyo. Kuya kufuneka siphonononge imephu yayo enkulu sikhangela izixhobo zokulwa neentshaba. NjengeWarZone, ine-crossover play ukuze zombini i-PC kunye ne-console gamers badlale kunye ukuba bayathanda.
I-Fortnite ime ngaphandle kwayo yonke i-Battle Royale ngenxa ye-aesthetics yayo ethandwayo kunye nombono wayo womntu wesithathu, ikwanayo nenkqubo yokwakha enika iintlobo ngeentlobo kumdlalo wokudlala. Ukuba ujonge umdlalo omnandi oza kuwudlala nenkampani, ngobuhle obungathandabuzekiyo, ngokuqinisekileyo lolukhetho olukhulu. Umdlalo ukhululekile, unokuthenga ngaphakathi kwesicelo ngokusebenzisa imali ebonakalayo ekufuneka siyithengile ngaphambili. Sinokuyifumana idabi lokulwa ukuze sifumane izinto ezongezelelweyo ngokusekelwa kukuyidlala.
Halo: The Master Collection oyiNtloko
Inkosi eyiNtloko iyi-icon yeXbox kwaye ngoku iyafumaneka kubo bonke abadlali bePC, ithuba lokudlala yonke isaga yeHalo. Ipakethi equka i-Halo: Ukulwa kuguqulwe, iHalo 2, iHalo 3 kunye neHalo 4. Zonke zinesisombululo esingcono kunye nokusebenza okuphuculweyo., Imidlalo eneendlela ezizodwa zomdlali omnye, ukonwabela enye yeesaga ezingcono ezenziwe nguMicrosoft yedwa.
Ukongeza, iMicrosoft ifake inani elikhulu leeseva ezinikezelweyo zabadlali abaninzi, umdlalo uyonwabela umdlalo ophakathi kweXbox kunye nePC, ke akusayi kubakho kunqongophala kwabadlali kwimidlalo yakho. Ngombono womntu wokuqala kunye neentshaba ezingaqhelekanga eziya kusibeka kwiintambo kunye nomdlalo omnandi kakhulu.
Fumana i-Halo: Ingqokelela yeNtloko yeNtloko ngexabiso elifanelekileyo kwi-Steam ngale nto unxibelelwano
I-Rainbow Six: Ingqonge
Omnye umdlalo obonakala kwicala lawo lokhuphiswano, esi sisavenge samva nje kwisaga eyaziwayo kaTom Clancy's Rainbow Six, ebandakanya umdlali omnye, ukusebenzisana kunye neendlela ezi-5 v ezi-5. Ngokusekwe ekulweni phakathi kwamapolisa kunye nabanqolobi, ngelixa Abanqolobi bahlala kwisakhiwo, iqela lamapolisa kufuneka libabulale ngeendlela ezahlukeneyo zokuhlasela. Umdlalo ubonakalisa iiklasi ezingamashumi amathathu ezahlulwe bubuzwe, nganye kuzo inezixhobo okanye ubuchule.
I-R6 iyonwabela enye yezona ndawo zinamandla zePC, egxila kubunzima bayo obukhulu kwicala le-Intanethi nakwi-Esports. Ukusukela oko yasungulwa ngo-2015, umdlalo awuyekanga ukufumana uhlaziyo lwasimahla kunye namaxesha alinika ubomi obungenasiphelo, ukongeza ekunciphiseni ezinye iincukuthu ezivela okanye ukungena kwabakhohlisi. Umdlalo okwangoku unexabiso elinomtsalane, ungadlala wedwa kodwa kuyacetyiswa ukuba uwudlale kunye nabahlobo ukuze uwonwabele.
Fumana iRainbow Six: ukungqinga ngexabiso elifanelekileyo kwi-Steam kule unxibelelwano
Ayinakuphoswa kolu luhlu, ukusuka kubenzi beTitanfall, i-Respawn Entertainment ikhuphe ezona zintle kwi-saga ye-Titanfall, nangona ililahla igama layo, ayenzi njalo kumoya we-franchise nge Ngomsindo kwaye uphambene umdlalo. Umdlalo unemephu enkulu apho sijongana nenqwaba yabadlali okanye amaqela kumlo apho nabani na wokugqibela eya kuphumelela, njengakuyo nayiphi na idabi.
Sigqamisa abalinganiswa bawo abahlukeneyo, apho sifumana khona izakhono ezizodwa, ezinjengeerobhothi enekhonkco eya kuthi incede ukufikelela kumaqonga aphezulu. okanye umlinganiswa okwaziyo ukusebenzisa isantya esiphezulu okanye ukudala iqonga lokutsiba eliza kusisa kwelinye icala lemephu. Zonke zikhatshwa zizixhobo ezininzi ezahlukeneyo esinokongeza kuzo izixhobo ze-ingame, ke ukuba sifumana umpu ngaphandle kwezincedisi, sinokongeza njengoko sizifumana okanye sizithatha kwiintshaba ezinciphileyo. Umdlalo ukhululekile ngentlawulo yangaphakathi nohlelo.
Fumana amaNqaku eSiqendu kwi-Steam ngale nto unxibelelwano
I-saga yeMetro yokugqibela, esekwe kwilizwe lasemva kokubhujiswa apho izilo zilawula ezitalatweni, umdlalo ubalisa ibali lika-Artyom, ophambili kwimidlalo edlulileyo, kwimishini yakhe enzima yokuqalisa ubomi obutsha empuma yeRashiya ebandayo. Umdlalo ubonakalisa imozulu eguqukayo ngezigaba zobusuku nemini kwimephu enkulu efihla iimfihlelo ezininzi kunye namaxesha oyikisayo.
IEksodus inenkqubela phambili evulekileyo kunye nehlabathi eliguqukayo apho ukuphonononga kunye nokuqokelela izixhobo kubaluleke kakhulu njengezidalwa ezilwayo. Ayinabadlali abaninzi, into engaqhelekanga ukuyibona kumdlalo wokuqala womntu wokudubula, kodwa kuyavunywa ukuba awulibali ukuba ukudubula kumntu wokuqala nako ukuphatha iyelenqe ngasemva. Isandi somdlalo sinceda ukuntywilisela indalo iphelele.
Fumana umdlalo ngexabiso elifanelekileyo ngale nto Ikhonkco lomphunga.
Ubomi besiqingatha: Alyx
Okokugqibela kodwa kungaphelelanga apho, sikhankanya enye yezimanga ze-2020, sisavenge samva nje seHlf Life. Hayi, ayisiyiyo i-Half Life 3 elindelweyo, i-Alyx ngumdlalo omtsha osebenzisa ubunyani bokwenyani ukusihambisa kwindalo iphela yesiqingatha soBomi ngeyona ndlela ifanelekileyo. Iziganeko zembali yayo entle zisibeka phakathi komdlalo wokuqala nowesibini wesaga kwaye usibeka ezihlangwini zeAlyx Vance. Utshaba luya lusomelela lomelele, ngelixa uxhathiso luthatha amajoni amatsha azokulwa nalo.
Ngaphandle kwamathandabuzo ngowona mdlalo ubalaseleyo wokwenyani ukuza kuthi ga ngoku, siza kuwonwabela ngokubaliswa kwawo kunye nokudlalwa kwawo, ubude bawo buyinto engaqhelekanga ngaphandle kokuba ngumdlalo weVR, oqhele ukona ixesha elifutshane. Useto lwayo yile nto nawuphi na umlandeli we-saga anokulindela, kunye nomoya omangalisayo kunye noseto olusivumela ukuba sinxibelelane phantse nayo nayiphi na into esiyifumanayo. Uluntu lusebenza ngokungakhathali ukwenza iimodyuli kunye nokwandisa umdlalo. Umdlalo ngokungathandabuzekiyo yeyona nto inzima kakhulu kwi-PC, ke siyakufuna izixhobo zala maxesha, kunye neiglasi ezifanelekileyo.
Fumana Ubomi besiqingatha: I-Alyx ngexabiso elifanelekileyo koku Ikhonkco lomphunga.
Ukuba awunguye umdubuli, kwelinye inqaku sicebisa ukuqhuba imidlalo, Sikunika nawe Ingcebiso kwimidlalo yokusinda.
Ukuba awunayo iPC ungajonga kweli nqaku apho sicebisa imidlalo yePS4 okanye enye indawo apho sicebisa imidlalo mobile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Ikhaya » Videogames » Eyona midlalo yokudubula ilungileyo kwiPC
IMelomania Touch, ii-headphone ezintle ezivela eCambridge Audio